दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणको अन्वेषण गर्न आएका चिनियाँ टोलीले बनाए बेसक्याम्प, अब कामले गतिलिने « Etajakhabar
प्रकाशित मिति : १८ कार्तिक २०७६, सोमबार ०९:१४
दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणको रुपमा रहेको दैलेखको श्रीस्थान र नाभीस्थानलगायतका क्षेत्रहरुमा अन्वेषणका लागि दैलेख पुगेको चिनियाँ प्राविधिक टोलीले दैलेखको डँुगेश्वर गाउँपालिका वडा नं. १ को चुप्रामा अन्वेषण र उत्खनन्को समय अवधिभर बस्नका लागि बेसक्याम्प निर्माण गरेको छ ।
चारवटै प्राविधिक टोली जिल्लामा आएको र आ–आफ्नो टोलीले अन्वेषणका काम पनि सुरु गरेको जानकारी उहाँले दिनुभयो । अहिले अन्वेषणका लागि प्राविधिक टोली बस्न दुई स्थानमा बेस क्याम्प खडा गर्ने कार्यतालिका अनुसार डुँगेश्वर गाउँपालिकाको वडा नं. १ मा बेसक्याम्प निर्माण गरेको छ भने दुल्लु नगरपालिका वडा नं. ५ दुल्लु अस्पतालको पछाडि बेसक्याम्प निर्माण गर्नका लागि नगरपालिकाले सहमति दिइसकेको भूगर्भविद् त्रिपाठीले बताउनुभयो ।